काठमाण्डौको कलंकीमा हेर्दा हेर्दै यस्तो भयानक गाडी दुर्घट्ना । प्रत्यक्षदर्शी यशोधाले भाईहरु यस्तो अवस्थामा देखिन्, दिदी दिदी भन्दाभन्दै गए ३ भाई । – Sanjal Nepal
Homeसमाचारकाठमाण्डौको कलंकीमा हेर्दा हेर्दै यस्तो भयानक गाडी दुर्घट्ना । प्रत्यक्षदर्शी यशोधाले भाईहरु यस्तो अवस्थामा देखिन्, दिदी दिदी भन्दाभन्दै गए ३ भाई ।
काठमाण्डौको कलंकीमा हेर्दा हेर्दै यस्तो भयानक गाडी दुर्घट्ना । प्रत्यक्षदर्शी यशोधाले भाईहरु यस्तो अवस्थामा देखिन्, दिदी दिदी भन्दाभन्दै गए ३ भाई ।
November 12, 2020 admin समाचार 4058
भिडियो समाचारको अन्तिममा राखिएको छ !पोखरा । नवबिबाहित अभिनेत्री आँचल शर्माका लागि अत्यन्तै दुखद खबर आएको छ । उनले भर्खरै मात्र डा. उदिप श्रेष्ठसँग धुमधामका साथ बिबाह गरेकी थिइन् । त्यो निक्कै गसिप बनेको थियो । उनीहरुको बिबाहमा देखिएको तडक भडक देखि पुर्व प्रेमिकाको बारेमा हिजो आज निक्कै चर्चा भईरहेको छ । करिब एक वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई उनीहरुले केहि साता अगाडी मात्र विवाहमा परिणत गरेका हुन् । निक्कै हुने खाने परिवारका यी दुवैले आफ्नो विवाहमा राम्रै खर्च गरेका थिए । स्टार होटेलमा रिसिप्सन देखि हेलीकप्टरमा गरिएको सवारीले फिल्मी नगरीमा एउटा तहल्का नै मच्चायो ।यी दुइजना नया जीवन सुरु गर्दै गर्दा अर्को गसिपले पनि बजार तातिएको छ । हुनत उदिप श्रेष्ठले स्वीकारी सकेका छन । उनको पुर्व प्रेमिकाको बारेमा बोलिसकेका छन । उनको पहिलो प्रेमिका भने फिलिपिनी हुन् । दोस्रो प्रेमिका भने नेपाल कै हुन् । ति नेपाली प्रेमिका अरु कोहि नभएर नेपाल कै चर्चित भलिवल खेलाडी तथा नायिका सिपोरा गुरुङ्ग हुन् । उदिप श्रेष्ठले सार्बजनिक रुपमै नाम नलिएपनि सिपोरा गुरुङ्गले भने यस अघि नै नेसनल टेलिभिजनमा यो कुरा सार्बजनिक गरेकी थिइन । उनले आफ्नो प्रेमी उदिप श्रेष्ठ मात्र भनेका छैनन् पहिलो र अन्तिम प्रेमी पनि उनि नै हुन् भनेकी छन ।
तिहारको मुखमा ३ घरका एक्ला छोराहरुको मृ’त्यु, सो’कमा डु’ब्यो परिवार
November 29, 2020 admin समाचार 1793
काठमाडौँ । प्रेम एक यस्तो आर्कषण हो जहाँ केहिबेरको भेट वा कुराकानीले पनि ठूलो महत्व राख्दछ भने कतिपय अवस्थामा बर्षौको परिचय पनि कहिलेकाहि काम लाग्दैन। अझ अहिलेको बद्लिदो पुस्तामा प्रेमको उमेर र आधारहरु नै फरक
January 17, 2021 admin समाचार 1534
पशुपतिमा ला,स जलाउने सपनाको आङ जिरिङ्ग पार्ने बिगत,कुनै दिन डोरी बोकेर आ,,त्म ह,त्या गर्न हिडेकि थिईन् !
November 18, 2020 admin समाचार 2917
भिडियो समाचारको अन्तिममा राखिएको छ,पुरा समाचार पढ्नुहोस यहाँका माझीहरु माछा मार्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने र इन्द्रावती नदीमा बालुवा चालेर दिन बिताउँछन् । आर्थिक अभावका कारण भूकम्पले ढालेको घर बनाउन सकेका थिएनन् । मुस्किलले पानी ओत्ने